मिति तोकिएका फिल्म के सही समयमा नै रिलिज होलान् ? « Mazzako Online
मिति तोकिएका फिल्म के सही समयमा नै रिलिज होलान् ?
२ बर्ष अघि मिति तोकेर प्रचारको सबै काम पुरा गरेर पनि फिल्महरु रिलिज हुन पाएनन् । ती फिल्म अझै पनि रिलिज हुन पाएका छैनन् । कहिलेबाट ती फिल्म रिलिज हुन्छन्, थाहा छैन । गतबर्ष फेरि केही फिल्मले यो बर्षका लागि प्रदर्शन मिति तय गरेका थिए ।
ती फिल्महरु साउनदेखि रिलिज सुरु हुनेछन् । तर, के तोकिएको समयमा नै ती फिल्म रिलिज होलान् त ? साउन १ गते फिल्म ‘डिसेम्बर फल्स’ देखि असोज १५ गते ‘कबड्डी ४’ सम्म, केही फिल्म प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छन् । यो बर्ष त परिस्थिती सहज बन्ला र फिल्म रिलिज गरौला भनेर बसेका फिल्मीकर्मीका लागि त्यो माहोल देखिएकै छैन ।
पौषदेखि हल खुल्दा पनि चैत्र सम्ममा माहोल बन्न सकेको थिएन । फिल्म क्षेत्र आज खुलेर भोली माहोल बन्ने क्षेत्र पनि होइन । यसैले, पनि डिसेम्बर फल्स, चिसो मान्छे, ए मेरो हजुर ४, सम्हालिन्छ कहिले मन, कबड्डी ४, चुरीफुरी लगायतका फिल्म तोकिएकै समयमा रिलिज होलान् त ? यो भने ठूलै प्रश्न देखिएको छ ।